သင် ဗီတာမင်-D ဓာတ် လိုအပ်နေပီလား? – Mandalar Hospital
ဗီတာမင် Dကို နေရောင်ခြည်မှ ပေးသော ဗီတာမင်ဟူ၍ ခေါ်ဆိုပါတယ်။
ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ပါက …
အာရုံကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ ခံစားရခြင်း၊
ရောဂါပိုး အလွယ်တကူ ဝင်နိုင်ခြင်း၊
စသည့် ရောဂါများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။
* လူတစ်ဦးသည် တစ်နေ့တွင် ဗီတာမင် D ပမာဏ 400 မှ 800 IU လိုအပ်ပါသည်။
ဗီတာမင် Dကို ဘယ်အရာများမှ ရရှိနိုင်ပါသလဲ?
၁။လူ့ခန္ဓာကိုယ် အရေပြားနှင့် နေရောင်ခြည် ထိတွေ့မိသည့်အခါတွင် ရရှိနိုင်သည့်အတွက် အထူးသဖြင့် နံနက်ခင်း နေရောင်ခြည်အောက်တွင် ၁၅မိနစ် မှ နာရီဝက်ခန့် နေသင့်ပါသည်။
၂။ ဗီတာမင် D ကို အောက်ပါအစားစာများမှလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
၃။ ဗီတာမင် D အားဆေးများ သောက်သုံးခြင်းမှလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ နေရောင်ခြည်ဓာတ် ကောင်းစွာ ရရှိသော နေရာဒေသမျိုးတွင် များသောအားဖြင့် ဗီတာမင် D အားဆေး သောက်သုံးရန် မလိုအပ်ပါ။
တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုသည့်အတိုင်း ဗီတာမင်D လွန်ကဲသွားပါကလည်း ဆီးကျောက်တည်ခြင်း စသည့် ဆိုးကျိုးများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိသဘောဖြင့် အားဖြည့်ဆေးများကို သောက်သုံးခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ပဲ ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်သာ သောက်သုံးသင့်ပါသည်။